Esmeraldas • Fanosorana vatana sy fanorana NuRu
I Esmeraldas dia tanàna amoron-tsiraka any avaratra andrefan'i Ekoatera. Io no sezan'ny Esmeraldas Canton ary renivohitry ny Faritanin'i Esmeraldas. Manana seranan-tsambo iraisam-pirenena izy ary seranana kely. I Esmeraldas no seranan-tsambo lehibe any avaratrandrefan'i Ekoatera, ary eo amoron'ny Pasifika amoron'ny reniranon'i Esmeraldas no misy azy.
Fotoana tsara indrindra hitsidihana amin'ny fotoana rehetra